Macluumaad la xiriira imaanshaha Fahad Yaasiin ee Magaalada Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Macluumaad la xiriira imaanshaha Fahad Yaasiin ee Magaalada Muqdisho
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Taliyihii hore ee Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa saakay soo gaaray Magaalada Muqdisho, xilli su’aalo ku gadaaman yihiin qaabka uu ku yimid Caasimadda Muqdisho.
Fahad Yaasiin oo iminka ku magacaabin La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Jimcihii laga celiyay Garoonka Diyaaradaha Ambouli ee Magaalada Djibouti, xilli uu ku sii jeeday Magaalada Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha hay’adaha amniga ee ka hawlgala Garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ayaa Universaltv u sheegay in Fahad Yaasiin iyo xubno kale oo wehlinayay ay la socdeen diyaarad ay soo kireysteen.
“Diyaarad ingeyr ah oo uu soo kireystay ayay la socdeen isaga iyo lix qof oo kale oo ka tirsan hay’adda. Saakay aroortii hore ayay diyaaradda ka soo degatay Garoonka Aadan Cadde, baabuur ayaa garoonka bannaankiisa u taagnaa, baabuurtii ayaana lagu geeyay Madaxtooyada.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan.
Waxa kaloo uu yiri “Wax dhib ah kama dhicin garoonka, ciidamada amnigana is hortaag kuma samayn, si nabadgelyo leh ayuu uga soo degay garoonka, waxaadna u maleysaa in qoloda Ra’iisal Wasaaraha ay ka warqabeen imaatinkiisa.”
Waxa uu intaasi ku daray “Warbaahinta iyo dadkuba waa inay fahmaan, diyaarad aan laga warqabin inaysan garoonka ka soo cago dhigan karin. Micnaheedu waxaa weeye diyaarad kasta oo imaanaysa inay ogolaansho haysato.”
Wararka ayaa sheegaya in Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) uu door weyn ka ciyaaray ku soo laabashada Fahad Yaasin ee magaalo madaxda Muqdisho, ka dib kulankii uu habeenkii Axadda la yeeshay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, oo sida la sheegay uu ku qanciyay in ninkaasi uu ku soo guryo noqdo magaalada.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Madaxweyne Qoorqoor uu damaanad qaaday inaanu ninkaasi carqalad amni ka abuuri doonin magaalada, inta baaritaanka kiiska Ikraan Tahliil Faarax uu socdo.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa inoo xaqiijiyay in Fahad Yaasiin uu caawa ku hooyanayo Aqalka Villa Somalia, goor sii horeysayna uu kulan saacado badan socday kula qaatay Madaxweyne Farmaajo.
Fahad Yaasiin oo lagu tilmaamo gacanta midig ee Madaxweyne Farmaajo ayaa sababteeda lahaa khilaafka haatan Madaxweynaha kala dhaxeeya Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda.
Khilaafkan ayaa soo ifbaxay, ka dib shaqo joojinta uu Ra’iisal Wasaaruhu ku sameeyay Taliyihii hore ee NISA, Fahad Yaasiin, waana xilli ninkaasi aanu keenin warbixin dhameystiran oo la xiriirta kiiska Ikraan Tahliil, oo 4-tii bishan lagu wargeliyay in muddo 48 saac ah uu ku keeno warbixintaasi.
Previous articleLafta-gareen oo magacaabay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Koonfur Galbeed
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay Shirka Sanadlaha ee QM